कान्लाको डिलमा बसेको चितुवा खेदेजस्तो होइन सीमा विवाद « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
कान्लाको डिलमा बसेको चितुवा खेदेजस्तो होइन सीमा विवाद
त्यो बिरालो धपाउन कसैले सक्छ भने त्यो सरकार नै हो ।सरकारमा यसका लागि सुझबुझपूर्ण कूटनीति, डाइनामिक संवाद र विज्ञता जरूरी हुन्छ । भावना, उत्तेजना र भाषणले विषयलाई झन् नियन्त्रणबाहिर लैजाने डर हुन्छ ।
हामी एक करोड़ हस्ताक्षर सङ्कलन गरौँला, अर्कोले एक अरब हस्ताक्षर बटुल्यो भने के हुन्छ ? हामी एक लाख सेना त्यहाँ जम्मा गरौँला, अर्कोले तीन लाख सेना थुपाऱ्यो भने के हुन्छ ? मार्चपास या भाषण पनि यस्तै हो । के सङ्ख्या ठूलो भयो भनेर आफ्नो माटो छोड़िदिने ?
सीमाविवाददेखि राष्ट्रियतासम्मका मुद्दालाई हामीले चुनाबी केक बनाएर बेच्दै आयौं । अर्काको सरकार भएका बेला केही थान कार्यकर्ता बटुलेर सीमामा मार्चपासको नाटक गऱ्यौं । राष्ट्रवादको व्यापार गऱ्यौं । सुरुङ् युद्धका भाषण गऱ्यौं ।
सन्धि खारेजीका एजेन्डामा चुनाब लड्यौं । तर आफू सत्तामा आएको दिनदेखि हाम्रा मुद्दा र एजेन्डा बदलिँदै आए । विपक्षमा हुँदा सीमामा समस्यै समस्या देखिने तर सत्तामा पुग्नासाथ सबै ठीक देखिने रोगबाट हाम्रो राजनीति गुज्रिँदै आयो । यो अहिले पनि जारी छ । आज कांग्रेसलाई कालापानी र सुस्ता दुःखेको छ र सरकारलाई निद्रा लागेको छ ।
विगत दुई वर्षको कार्यकाल त मुख्य एजेन्डा भनेको पार्टी एकीकरण र साठी चालीसको भागबन्डा नै रहेजस्तो देखिए पनि आगामी तीन वर्ष देशका ठोस मुद्दामा सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने कामना गरौँ । नागरिक समाजले पनि यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका गम्भीर विषयमा आलोकाँचो विज्ञप्ति र भाषण गर्नुभन्दा गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान, प्रमाण र दस्ताबेज सङ्कलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनका निम्ति पहल गर्नु जरूरी छ ।